गण्डकी प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव : जनमोर्चा नेता कृष्ण थापा भन्छन्, मेरो मन गुरुङसंगै छ ! – Kendra Khabar
गण्डकी प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव : जनमोर्चा नेता कृष्ण थापा भन्छन्, मेरो मन गुरुङसंगै छ !
२०७८, १२ बैशाख आईतवार १८:५६
गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कसरत भइरहेको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाको निर्णयक शक्ती बनेको छ ।
जनमोर्चाको साथमा गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अहिले बहुमत सहित सरकारमा छन् । जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पछि गुरुङ नेतृत्वको सरकार धरापमा मात्र परेन संसदीय मर्यादा उल्लंघन भएन भने सरकार ढल्ने निश्चित जस्तै छ ।
तर, नयाँ सरकार बनाउने महत्वपूर्ण र निर्णायक शक्ती मानिएको जनमोर्चा, गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा भने मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा देखिएका छन् ।
आइबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितको बैठक पछि बोल्दै नेता थापाले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे पनि मुख्यमन्त्री गुरुङसंग सहकार्य रहेको स्विकार गरे । थापाले भने, चार दल, पाँच दल के के भन्छन म कुनै दलको बैठकमा सहभागी छैन, चार दलमा हाम्रो मसिनो सहकार्य हैन । विशेष गरि मन्त्री के के हुन्छ, मन्त्री बन्ने हो, त्यो हामेमा जोडिन्न । मतदान अविश्वासको पक्षमा हो मुख्यमन्त्री गुरुङसंग सहकार्य हो भनि पत्राकारले सोधेको प्रश्नमा उनले त्यही हो भन्दै हासेर जवाफ दिए ।
पार्टी केन्द्रले गरेको निर्णय मान्त्रे बताएका थापा, गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडानमा थिए । पार्टीले केन्द्रकाटै निर्णय गरेर अविश्वासको पक्षमा उभिन निर्देशन दिए पछि थापा अप्ठ्यारोमा परेका थिए ।
एक स्वतन्त्र सहित २८ सांसद वर्तमान गुरुङ नेतृत्वको सरकार संग छ । जनमोर्चाले साथ दिने पक्का भए पछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले २८ सांसदको हस्ताक्षर सहित अविश्वासको प्रस्ताव अगाडी बढाएका थिए । जनमोर्चाको ३ सांसद छन् । यो मत सरकार बनाउन प्रयाप्त हुन्छ । गण्डकी प्रदेश सभामा ६० सांसद छन् ।